Fahfaahin dabkii ka kacay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaFahfaahin dabkii ka kacay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho
11/01/2019 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Waxaa lagu guuleystay in la damiyo dabkii xalay ka kacay Suuqa weyn ee Bakaaraha oo ah Suuqa ugu weyn Soomaaliya, islamarkaana ay ku yaallaan ganacsiyo kala duwan.
Dabka ayaa ka kacay qeybta Hudheyda dukaan yar oo ku yaalla, waxaana uu gaaray ilaa iyo qeybta Maacuunta oo ku dhegan Suuqa Khaliifa.
Gaadiidka dabdamiska Shirkaddaha sidda gaar ah loo leeyahay iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa goor dambe ku guuleystay in ay dabka damiyaan.
Qaar ka mid ah Ganacsatadda Suuqa ayaa Warbaahinta u sheegay in Hanti badan ay ku gubatay dabkii xalay, islamarkaana uu ahaa Mid ka mid ah kuwii ugu cuslaa ee Suuqa soo mara.
Ilaa iyo haatan lama oga khaasaraha rasmiga ah ee dabkaasi ka dhashay balse waxaa wali socda Baaritaano kala duwan.
Wasaarada Amniga oo xabsiga dhigtay sargaal ka tirsan ciidamada Booliska Soomaaliya